I-EA068 - I-OMG Bedwetting Alarm Yengane / Ingane / Ingane / Asebekhulile - Izixazululo ze-OMG
I-EA068 - I-OMG Bedwetting Alarm Yengane / Ingane / Ingane / Asebekhulile
Ukuvinjwa kungaba nzima kuwe nobabili kwengane yakho. Kunezixazululo eziningi ze-bedwetting kufaka phakathi imithi yokwenziwa, ukuvakasha kodokotela okubizayo kanye nama-alamu we-bedwetting.
Amanye ama-alamu axegayo, ayakhathaza ingane ukuthi isebenze, futhi amemeze ukuthi ingane yakho inenkinga yokujulisa umbhede. Kuthiwani uma bekukhona isixazululo esisebenza njengembhede,
ibisebenzisa indlela efakazelwe emtholampilo futhi ibinezindaba zokuphumelela ezingaphezu kuka-200,000 + ukuyenza isipele? Cabanga ngokuzethemba kokunyuka kwengane yakho nobusuku obuncane obuphazamisekile.
Ku-2 p3t (SS23D06G1. 5) izinguquko ezintathu zokulawula isimo sokusebenza somkhiqizo: lapho ukushintshela phakathi, kusimo se- “OFF”, chofoza umkhiqizo ngokuya ngohlelo ku-A, umkhiqizo ngeke sebenza. Lapho inkinobho yokuguqula ingakwesobunxele somkhiqizo, chofoza kwimikhiqizo ngokuya ngeswishi yesistimu, Umsindo we-buzzer, amalambu aluhlaza okwesibhakabhaka akhanyayo, onomsindo kodwa hhayi imoto yokudlidliza. Lapho uthinta umkhiqizo ohlangothini lwesokunene seswishi yokushintsha, chofoza kumkhiqizo ngokuya ngesistimu ku-A, umkhiqizo usesimweni se-A okungukuthi i-voice motor vibration (amalambu aluhlaza okwesibhakabhaka azokhanya ngokulingana ngomsindo nemoto).
Qaphela: uma isimo sokushaja, inkinobho ngokuya ngohlelo A ingeke isebenze ngaphansi kwamagiya amathathu wokuguqula ukushintshanisa, kodwa ngaphansi kwamagiya amathathu wokushintsha igiya, kungashaja.
ukubukeka: Inhliziyo Shape
amandla: I-600-800mAh / 3.7V Iyakwazi ukuphinda ifakwe
Isistimu ye-alamu: I-alamu Yomsindo + Ukudlidliza
Ububanzi be-Fuselage: 5cm
Ubude Bokunika Umugqa wesiginali: 95cm
I-Alarm Volume: 50-82DB
I-Voltage yokufaka: 5.0V
Ubuningi Bokusebenza Kwamanje: I-150MA
Ikhono leBhethri Lokwakha-Lithium: 500mAh
I-wakha-in Lithium Battery Voltage: 3.7V
Isikhathi Sokushaja Ibhethri: Okungenani. Amahora we-2
Ukubuka okuphelele kwe-6351 Ukubuka kwe-3 Namuhla